Talk:Kulyada Farsamada Baardheere - Wikipedia
Talk:Kulyada Farsamada Baardheere
[Isticmaale: Baardheere] Tifaftiraha qaybta so.wikpedia.org; fadlan ma heli karnaa in Kulyada Farsamada Baardheere, ereyga Kulyada hikaadeeda laga badalo server-ka oo laga dhigo "Kuliyada" si ciwaanka qodobka uu u noqdo Kuliyada Farsamada Baardheere.
Sidookale, magacyada diiwaangalsan qodobada Af Soomaaliga, fadlan hikaadaha ka saxa si qoraalada diyaarsan ay u noqdaan kuwo jiilasha dambe dhaxalgal u noqda. Adinkana howshiina mid dhalin iyo ciroole intaba ka faa'iidaystaan. Dhalinta iyo dadka waaweyn iyo aqoonyanada Soomaaliyeed, arday iyo barayaal intaba waxay ka faa'iidaysan lahaayeen qoraalada Diinta, Af Soomaali, Suugaan, Dhaqaalaha, Beeraha, Waxbarashada, Taariikhda, Dowlada, Gabayada, Abwaanada, Gobollada iyo mowduuc walba oo qoraal laga hayo ama hada ka dib laga diyaariyo.
Kulyada Farsamdaa Baardheere bareyaasheeda iyo ardaydii wax ka bartay intaba waxaa lagu bartay inay u qaaraamaan dhamaan laamaha aqooneed iyo shaqo ee wadankeena. Bile Cabdalle ayaa ka mid ah ardaydii ka qalin jabisay Kuliyada Farsamada Baardheere ee Suugaanta Soomaaliyeed wax ka qoray.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:Kulyada_Farsamada_Baardheere&oldid=114467"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Maarso 2013, marka ee eheed 13:56.